Kutanga kwekugadzirwa kweApple Watch Series 3 kwave pedyo | Ndinobva mac
Kutanga kwekugadzirwa kweApple Watch Series 3 kwave pedyo
Mimwe mishumo inoyambira nezvekuguma kwekuyedzwa kweApple Watch Series 3 uye kutanga kwayo kwekugadzira. Mupfungwa iyi, isu tapera Nyamavhuvhu izere nenhau uye runyerekupe pamusoro pechinhu chinosakara cheApple, chimwe chinhu chinoita kuti tifunge kuti tichava ne modhi nyowani munaGunyana apa panounzwa iPhone nyowani.
Mupfungwa iyi, zvakataurwa pakutanga ndezvekuti isu taizoona dhizaini nyowani pawatch, asi ruzivo rwechizvino-zvino runoramba ichi chigadzirwa chitsva. Izvo zvinoita sezviri pachena ndezvekuti Apple Watch nyowani ichave neLTE uye zvingave zvakare izvozvi muchikamu chekupedzisira chekuyedza kutanga kugadzirwa kwemazhinji.
Kwayakabva kunoratidza kuti Quanta Computer, ichatanga kutumira mhando nyowani dzeApple Watch Series 3 mukota yechina yegore rino uye izvi zvinoreva kuti chigadzirwa chinofanira kunge chave pedyo kana vachida kusvika kumayuniti uye nenguva yekupedzisira. Zvatinofanira kuona pakutanga ndeyekuratidzira pamwe neiyo nyowani iPhone 7s, 7s Plus uye inogona kuitika iPhone 8, saka tinovimba kuti vachazivisa iyi vhezheni neLTE yeApple Watch sechivandudzo asi zvese izvi runyerekupe kusvika nhasi uye ipapo hapana chakasimbiswa zviri pamutemo.
Iyi modhi nyowani yeApple Watch Series 3 iri kumutsa nharo zhinji nekuda kweiyo zvinogoneka LTE yekubatanidza uye izvi ndizvo zvatinogona kuverenga muchinyorwa nemumwe wedu Javier Porcar. Zvirokwazvo zvinoita sekunge dhizaini yewachi yaisazochinja gore rino uye isu tichaongorora izvi mumazuva mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kutanga kwekugadzirwa kweApple Watch Series 3 kwave pedyo
New auction yeApple inoshanda zvizere